एकांकी १० – नाम तिम्रो काम हाम्रो – मझेरी डट कम
एकांकी १० – नाम तिम्रो काम हाम्रो
प्रिन्सिपल : (बिस्तारै सहज भावमा तर क्रोधीरूपमा) ए, उसो भए यस स्कुललाई राजनीतिको अखडा बनाउने सोच छ, तिमीहरूको ? तिमीहरूको यस्तो सोच असफल हुनेछ । (केही ठूला आँखा पारेर) के सोच्छौ आफूलाई ? स्कुलले तिमीहरूको के विगार गरिदियो ? किन मात चढिरहेछ तिमीहरूको दिमागमा । शिक्षक आउँछ तर स्कुलले मूल्याङ्कन गरेर आउँछ । उसलाई सुविधा दिन्छ तर जस्तो आम्दानी छ त्यस्तै दिन्छ । अभिभावकबाट जस्तो सुविधा लिएको छ त्यस्तै सेवा दिन्छ । सारा देश लोडसेडिङ्गले आक्रान्त भएको बेलामा कसरी स्कुलले निरन्तर रूपमा कम्प्युटर ल्याबको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्छ । बिजुली भएको बेलामा उपलब्ध गराएकै छ । यति धेरै…..। (त्यतिकैमा भाइस प्रिन्सिपलको प्रवेश हुन्छ र प्रिन्सिपलसँगबाहिर आउन सङ्केत गर्छन् । दुवैजना एकक्षण कानेखुसी गर्छन् । एकाएक प्रिन्सिपल प्रसन्न देखिन्छन् । उनको प्रसन्नता प्राकृतिकताभन्दा कृतिमता बढी भएको स्पष्ट झलक मिल्दछ ।) अँ म भन्दै थिएँ । भोलिदेखि नवनिता मिस तिमीहरूलाई सामाजिक शिक्षा पढाउन आउँदै हुनुहुन्छ । (विद्यार्थीहरू खासखुस गर्छन् । सामान्य हल्ला फिँजिन्छ ।)